မာစတာ E ကို - Iwata Tech မှ
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » မာစတာ E ကို
Beam Angle 45 °ညနေခင်းတောက်ပ Focusing LED
အရောင်အပူချိန် Range: 2600K သည် ~ 8000K
ဘက်ပေါင်းစုံအနုပညာ -In link ကိုစနစ်
စမတ်ဖုန်း APP ထိန်းချုပ်မှု / အဝေးထိန်း
USB-C PD & QC အမြန်အားသွင်းရန်အထောက်အပံ့
မာစတာစီးရီးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအဆင့်အတန်းဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်. ၎င်းသည်အလွန်တိကျသောအရောင်အင်ဂျင်နှင့်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ထားသည်; အလင်းထိန်းချုပ်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏. လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အဆင်ပြေမှုသည်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အလင်းအရည်အသွေးနှင့်အတူလာသည်. Art-in Link System * သည်စီးရီးတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်, ၎င်းသည်အမြန်နှင့်ပိုမိုစုံလင်သောကွန်ယက်လည်ပတ်မှုနှင့်မြင်ကွင်းမျိုးပွားခြင်း (သို့) virtualization ကိုသဘောပေါက်သည်. OTA တန်းစနစ်မှတဆင့်, အသုံးပြုသူများသည်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကိုအမြဲရနိုင်သည်. ထိရောက်မှု, ကြာရှည်ခံမှု, Multipunction နှင့် Multimedia နည်းပညာသည်ဓာတ်ပုံ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူများအတွက်သိသာသောတန်ဖိုးကိုဖန်တီးပေးသည်.
မာစတာ R / မာစတာအီး, ဤရွေ့ကား2အိတ်ဆောင် LED light wand ၏ professional model များသည်အသွင်အပြင်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်.
ဘုံအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်: ၎င်းတို့သည်အကြမ်းခံပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပုံမှန်သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ကျဆင်းမှုကိုခုခံသည်. အရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီနှင့်နူးညံ့သောတိုက်နယ်ဒီဇိုင်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်သည် (2 အများဆုံးပါဝါမှာနာရီ) PD နှင့် QC အမြန်အားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပါ. အဆိုပါဆန်းသစ်ပြည်တွင်းရေးန့်အသတ်နှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများသည်အလိုအလျောက်အလင်းရောင်၏ထောင့်ထောင့်ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်. အရောင်နှင့်အရောင်ညှိနှိုင်းမှုကိုကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိနှစ်ကွင်းအလှည့်မှတစ်ဆင့်သိရှိနိုင်သည်. ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံနှစ်ခုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုယူဆောင်လာသည်.
“ MR” သည် RGB အလင်းအဖြစ် 5-Color အင်ဂျင်နှင့်လာသည် 21 မြင်ကွင်းဆိုးကျိုးများကို၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်, “ ME” သည် beam-angle ၄၅ ဒီဂရီနှင့်အတူစူပါတောက်ပသော LEDs များနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မားသော illumination ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်9မြင်ကွင်းဆိုးကျိုးများ. တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Master light wands ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်.
Art-in Link System သည်စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့်အတူ * MR ကိုအားဖြည့်ပေးမည် & “ ME” ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ play မှပါစေ.
* Art-in Link System နှင့်သက်ဆိုင်ရာ App သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမကြာမီလာမည်.
2600K သည် ~ 8000K (± 200K)
CRI 96, TLCI ≥ 98
အလင်းအိမ် (0.5 မီတာခြားပြီး)
2000lx @ 8000K, 1700@ 2600k @ lx
CCT / မြင်ကွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု
Internal Lithium Battery စွမ်းဆောင်ရည်
14.832.5wh V ကို / 2200mah
အကြောင်း2နာရီမှာ 100% စွမ်းအား, အကြောင်း 64 နာရီမှာ 1% စွမ်းအား
5V / 1က, 5V / 2.1က, 9V / 2.5က, 12V / 2က (လျင်မြန်စွာအားသွင်း / ပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့်အတူအလုပ်)
425မီလီမီတာ x ကိုΦ 38mm
-5 ℃နှင့် 35 between အကြားအသုံးပြုမှုကို (အစိုဓာတ်ကိုငွေ့ရည်ဖွဲ့သို့မဟုတ်နှင်းခဲမရှိပါ)
-5 ℃နှင့် 35 between အကြားအားသွင်းနေစဉ်အတွင်း (အစိုဓာတ်ကိုငွေ့ရည်ဖွဲ့သို့မဟုတ်နှင်းခဲမရှိပါ)
-20 'နှင့် 60' 'အကြားသိုလှောင်မှု
ROOM တွင် 901,9 / F ကို, tung Che ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရေးစင်တာ 246 des Voeux လမ်းမကြီးအနောက်, ဟောင်ကောင်